Madaxweynaha oo ka baaqday Booqashadii Jowhar xili la filayo in uu gaaro magaalada Kismaayo – Radio Daljir
Madaxweynaha oo ka baaqday Booqashadii Jowhar xili la filayo in uu gaaro magaalada Kismaayo
Seteembar 8, 2013 3:09 b 0
Jowhar, September 8, 2013 – Madaxweynaha Soomaaliya xasan sheikh Maxamuud ayaa saaka laga filayey in uu booqdo degmada Jowhar ee xaruunta gobolka Shabeelaha dhexe, safarkaas oo ahaa mid uu dhulka ku mari lahaa Madaxweynaha ayaa la hakiyey.
Amaanka goobaha muhiimka ah ee Jowhar ayaa la adkeeyey, sidoo kale waxaa la sugay amniga guud ee jidadka ay mari lahaayeen wefdiga madaxweynaha dalka, waxaa jiray wefdi horudhac ah oo ka tirsan dowladda kuwaas oo shalay booqday Jowhar.
Wararka maanta soo baxay ayaa sheegaya in dhamaan ciidamo isugu jira kuwa dolwadda iyo AMISOM, iyo wefdigii dowladda ee gaaray Jowhar ay dib ugu laabteen Muqdisho, kadib markii loo sheegay in uu baaqday safarka? Madaxweynaha dalka.
Madaxtooyada Soomaaliya ilaa hadda ma aysan shaacin sababta uu u baaqday safarka Madaxweynaha dalka, balse wararka ?aan helayno ayaa sheegaya in Madaxweynuhu uu ku hormarayo magaalada Kismaayo ee xaruunta maamulka KMG ah ee Jubba.
Booqashada Madaxweyne ?Xasan sheikh ee Kismaayo ayaa qeyb ka noqonaysa xoojinta heshiiskii dowladda iyo maamulka Jubba ay ku gaareen Ethopia, haatan waxaa Muqdisho ku sugan wefdi uu horkacayo madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Madoobe.
Madaxweynaha dalka ayaa booqanaya deegaano badan oo ka tirsan dalka ka hor inta uusan u amba bixin magaalada Brussels ee dalka Beljium, halkaas oo uu ka dhacayo shirka dhaqaalaha loogu yaboohayo Soomaaliya ee lagu balansan yahay, waxaa xusid mudan in Madaxweynuhu booqday dhowaan magaalada Marka ee xaruunta shabeelaha hoose.
Xaalada dhaawacyada wax ku noqday Qarax xalay ka dhacay Beledweyne oo aad looga dayrinayo
AADA Dugsiyada waxaa ka fa?iideysanaya 1 Milyan oo caruur ah sanadaha soo socda (War-saxaafadeed)